3rd Myanmar's Biggest Property Expo
Date : 19, 20, 21 October 2018 (Friday Saturday & Sunday)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီပေါင်း (၈၀) ကျော်ရဲ့ အိမ်ခန်းပေါင်း (၅၈၀၀) ကျော်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်
3rd Myanmar’s Biggest Property Expo
EXPO WILL START IN
Date : 19, 20, 21 October 2018 (Fri, Sat & Sunday) Tatmadaw Hall Time :9am -6pm
သိန်း (၂၀၀) ကျော်မှ စတဲ့ တန်ဖိုးသင့်တိုက်ခန်းများ၊ သိန်း (၅၀၀) ကျော်မှစတဲ့ အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုများ၊ သိန်း (၇၀၀) ကျော်မှစတဲ့ အရည်သွေးမြင့် လုံးချင်းအိမ်များ ပါဝင်ပြသ ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်ယူသူစိတ်တိုင်းကျ ညှိနှိုင်းပေးချေနိုင်တဲ့ Down Payment များနှင့် ကျန်ငွေကို အရစ်ကျလစဉ်ပေးသွင်းပြီး ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း
ပြပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ အွန်လိုင်းမှ စာရင်းသွင်းသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ၊ ပြပွဲရက်အတွင်း Lucky Draw အစီအစဉ်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ။
ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် နှစ်ရှည်အရစ်ကျ ဝယ်ယူနိုင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ နဲ့ AYA Bank, KBZ Bank, YOMA Bank တို့ကလည်း အိမ်ရာချေးငွေ တစ်ခါတည်းလျှောက်လို့ရအောင် အကောင်းဆုံးပါဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြပွဲကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးက အိမ်ရာ Project ပေါင်းများစွာကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာပြီး မိမိနဲ့အသင့်တော်ဆုံး အိမ်ရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
ဟောပြောပွဲနှင့် ပျော်ရွှင်စရာ အစီအစဉ်များ
အိမ်ခြံမြေလောကမှ ပညာရှင်များက နေ့ရက်အလိုက် ဟောပြောမည့် အစီအစဉ်များ၊ မိသားစုတိုင်း ၀င်ရောက်ဆင်နွဲနိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ အစီအစဉ်များ
ပြပွဲ၂ ရက်အတွင်းမှာသာရမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းများ
(၁၅)နှစ်အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး။ လစဉ် ဒေါ်လာ(၁၀၀၀) သာပေးသွင်းနိုင်မယ့် အစီအစဉ်။ Golden City ဧ၊်အထူး Promotion အဖြစ် ပထမဆုံးအခန်း(၁၀)ခန်းကို ၀ယ်ယူသူများကို Discount 20% အထိသက်သာနိုင်သော အထူးအခွင့် အရေးများဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Moe Myint San Construction
အထူးလျှော့ဈေးတွေနဲ့ မြို့နယ်စုံက အဆင့်မြင့် တိုက်ခန်းတွေ ကွန်ဒိုတွေကို ရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Kaberaye Executive Residence
ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် (၁၀၀%) ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်မက်ထဲက နန်းတော် Kaberaye Executive Residence ကို ပြပွဲရက်အတွင်း အထူးပရိုမိုးရှင်းများဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်။
ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အဆင့်မြင့်မြင့် တည်ဆောက်ထားတဲ့ River Front Garden Condo ကို ပြပွဲရက်အတွင်း အထူးပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်သလို ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲ နှစ်ရှည်အရစ်ကျ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Kanbae Towers Condo
ကံဘဲ့ဘူတာရုံလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သိပ်မကြာခင် ပေါ်ထွက်လာတော့မယ့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ကွန်ဒိုမီနီယံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kanbae Towers Condo ကို ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေ နှစ်ရှည်အရစ်ကျတွေနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MKT Construction မှတည်ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းနှင့် မီနီကွန်ဒိုတွေကို ပြပွဲရက်အတွင်းဝယ်ယူလျှင် အထူးလျှော့ဈေးတွေနှင့် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမည့်အပြင် ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ရှည်အရစ်ကျဖြင့်လည်း ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
AMPS Construction မှတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင် ၊လှိုင် ၊ ကမာရွတ်၊ မရမ်းကုန်း၊ ပုဇွန်တောင်၊ တာမွေ၊ ရန်ကင်း ၊ ဗဟန်း မှ အိမ်ရာများကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး အထူးပရိုမိုးရှင်းများဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။
Zen Property မှ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင် ရှိအိမ်ရာစီမံကိန်းများကို ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ အထူးပရိုမိုးရှင်တွေနှင့် ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
SMT က မြို့နယ်ပေါင်း (၁၅) မြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ Project တွေကို အကောင်းဆုံးငွေပေးချေမှုပုံစံ၊ အရည်အသွေး အပြည့်ဝဆုံးအခန်းတွေကို တန်ဖိုးအသင့်တင့်ဆုံး ဈေးနှုန်းတွေနှင့် ပြပွဲရက်အတွင်း ရောင်းချပေးသွားမည်။
Ayar Chantha Executive Condo
ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုကို ပြပွဲရက်အတွင်း ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ကနဦးငွေချေစရာမလိုဘဲ လစဉ် ငွေကျပ်(၅)သိန်းကျော်သွင်းရုံနဲ့ ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Toe Tet Thar Construction
တစ်လ (၇)သိန်းပေးပြီး တိုက်ခန်းတစ်ခန်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ ကုမ္ပဏီဖြင့် တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူပါက (၂)နှစ်အတိုးမဲ့ ဝယ်ယူနိုင်သလို ဘဏ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး (၁၅) နှစ်အထိ နှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ စီးပွားလုပ်ငန်း တစ်ခုမှာ အမျှော်အမြင် ရှိသူတစ်ယောက်လား? မန္တလေး မြို့မှာ စီးပွားရေးအရ ရင်းနှီးမြုပ်နှံချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး City Star Shopping Square ကို ပြပွဲရက်အတွင်း အထူးပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Jasmine Palace Construction Co.ltd
7th Milie Condo ကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ သလ္လာဝတီလမ်းနဲ့ ဦးကျော်လှ လမ်းထောင့်၊ (၇)မိုင်မှာ တည်ဆောက် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 7th Mile Condo ကို Jasmine Palace Construction Co.ltd ကနေ တည်ဆောက်ထား တာဖြစ်ပြီး အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ဆေးရုံဆေးခန်း၊ ကျောင်း၊ ဈေးဝယ်စင်တာ များ၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်တို့နဲ့ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်လို့ သွာရေးလာရေး အဆင် ပြေလွယ်ကူစေပါတယ်။ ပြပွဲရက်အတွင်း အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Slade Property Services မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက စီးပွားရေးမြို့ငယ်တစ်ခုအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာတော့မယ် Kantharyar Centre ရဲ့5A Class Office Tower နှင့် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာများကို ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ မဂ္ဂင်ဆောက်လုပ်ရေးကနေ အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် အထူးလက်ဆောင်တွေ မဲနှိုက်ကံစမ်းခွင့်ရမှာ ဖြစ်သလို ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်း နှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Royal Aung Myanmar Construction
Royal Aung Myanmar Construction တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ခန်းတွေကို သိန်း (၃၀)ကနေ သိန်း (၁၀၀)ကြားထိ အထူးလျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Amazing Sky Construction
Amazing Sky Construction ကတော့ ပြပွဲမှာ ကျပ်သိန်း(၄၀၀) မှ စတင်တဲ့ တိုက်ခန်းတွေနဲ့ အဆင်မြင့် မီနီကွန်ဒိုတွေကို စုစည်းပြသရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ပြည်သာယာလမ်းရှိ Amazing Sky ရဲ့ အဆင့်မြင့် မီနီကွန်ုဒိုအိမ်ခန်းကို ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် 42 TV ၊ Chigo Aircon တစ်လုံး လက်ဆောင်များအပြင် ကိုရီးယားပါကေးခင်းပေးသွားဖြစ်လို့ လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်...
iGreen က တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့နယ်စုံက အိမ်ရာစီမံကိန်းတွေကို ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေ အထူး ငွေပေးချေမှု စနစ်တွေနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Than Lwin Aung Coustruction
သံလွင်အောင် ဆောက်လုပ်ရေးကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ရှိ တန်ဖိုးသင့် တိုက်ခန်းလေးတွေနဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ် မှာရှိတဲ့ Mini Condo လေးတွေ ကို အထူးဈေးနှုန်းတွေ နဲ့ ရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ လာရောက်ဝယ်ယူ သူများအတွက် အထူးလက်ဆောင်များ ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
U Tharmardi Construction
ကျပ်သိန်း (၃၀၀) မှ စတင်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်တို့ရှိ တိုက်ခန်းများကို ဦးသမာဓိ ဆောက်လုပ်ရေးမှ ပြပွဲမှာ ပါဝင်ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲမှာ AYA Bank နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ရှည်အရစ်ကျဖြင့် ရောင်းချပေသွားမှာဖြစ်လို့ သင် အလွယ်တကူ အိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ ဦးသမာဓိမှ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်ခန်းတွေကို ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ကိုရီးယားပါကေး ခင်းပေးမယ့်အပြင် Aircon တစ်လုံးလက်ဆောင်ပါ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Soe Yadanar
မြန်မာဆောက်လုပ်ရေးမှ ကျပ်သိန်း( ၂၇၅) မှ စတင်တဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်း၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်များအပြင် သာကေတ၊ဒေါပုံမြို့နယ်တို့က တိုက်ခန်းများကို တစ်နေရာတည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်အောင် စုစည်းပြသရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ခန်းတွေကို ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ရှည်အရစ်ကျဖြင့် ရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mon Mon Yee Yee Construction
မွန်မွန်ရည်ရည် ဆောက်လုပ်ရေးကတော့ ကျပ်သိန်း(၂၇၅) မှ စတင်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တို့က တိုက်ခန်းများကို ဘဏ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ရှည်အရစ်ကျဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်အောင် ပါဝင်ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ocean Star ဆောက်လုပ်ရေးကတော့ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း (၄၂၀) မှ စတင်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ကတိုက်ခန်းများကို ပြပွဲသုံးရက်အတွင်းမှာ ပါဝင်ရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ရှည်အရစ်ကျဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်အောင် ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။Ocean Star မှ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်ခန်းများကို လာရောက်ဝယ်ယူသူတိုင်းကို TV လက်ဆောင် ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dagon Thiri Construction
Dagon Thiri Construction မှ ပြပွဲမှာ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း (၂၈၀) မှ စတင်တဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်က တန်ဖိုးသင့် တိုက်ခန်းများကို သီးသန့်စုစည်း ပြသရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ Dagon Thiri Construction မှ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်ခန်းများကို ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ရှည်အရစ်ကျဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ အိမ်ခန်း လာရောက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ (၅) ရာခိုင်နှုန်း အထူးလျှော့ဈေးပေးသွားမှာမှာပါ...
Mya Yaung Chal Construction
ပထမဦးဆုံးဝယ်ယူတဲ့သူ (၅)ဦးကို ငွေကျပ်ဆယ်သိန်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ငွေကျပ် ဆယ်သိန်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ Aircon 1HP (၁)လုံး၊ Two Door ရေခဲသေတ္တာ၊ အခန်းတစ်ခန်းဖွဲ့လက်ဆောင်တွေ ပေးအပ်သွား မယ့် ကုမ္ပဏီကတော့ မြရောင်ခြယ်ဆောက်လုပ်ရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခန်းအမျိုးအစားအလိုက် ပြပွဲရက် အတွင်း ဝယ်ယူမယ့်သူတွေအတွက်လည်း လက်ဆောင်တွေ စီစဉ်ထားပါသေးတယ်။
MMC Construction မှ မရမ်းကုန်း၊ဗဟန်း၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ အရည်သွေးမြင့်အိမ်ခန်းတွေကို ပထမဦးဆုံး(၃၀)ရာခိုင်နှုန်း ပေးချေပြီး ကျန်တဲ့ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကို (၂)နှစ်အတိုးမဲ့ အရစ်ကျစနစ်၊ (၁)နှစ် အတိုးမဲ့ အရစ်ကျစနစ်တွေနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။
Mahar Golden Luck Construction
Mahar Golden Luck Construction မှ အဆင့်မြင့် အိမ်ခန်းတွေကို ပြပွဲရက်အတွင်းမှာ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း (၃၀) ကနေ သိန်း (၆၀) အထိဈေးလျော့ပေးမယ်။ အသင့်နေထိုင်ရုံ Decoration ပြင်ဆင်ပေးမယ် ဆိုတော့ သိန်းရာချီနီးပါး သက်သာမယ့် အခွင့်အရေးနော်။
First Lakabar Construction
First Lakabar Construction ကတော့ ပြပွဲသုံးရက်အတွင်းမှာ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း (၂၃၀) မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ( ၆၅၀) အထိရှိတဲ့ မြောက်ဥက္ကလာ၊တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်တို့က တိုက်ခန်းများကို ပါဝင်ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။ ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ရှည်အရစ်ကျဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သလို Developer Payment Plan ဖြင့် ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ကနဦးငွေပေးသွင်းပြီး (၂) နှစ်အထိ အတိုးမဲ့ အရစ်ကျဖြင့် ဝယ်ယူရှိနိုင်ပါတယ်။
Moon Sun Construction ကနေ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ခန်းများကို အထူးပရိုမိုးရှင်းများဖြင့် တပ်မတော်ခန်းမမှာ ကျင်းပမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲကြီးမှာ ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Golden Hour Construction
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နဲ့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းတွေကို (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ငွေပေးချေပြီးတာနဲ့ ကျန်တဲ့ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကို (၁) နှစ် အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
Triple Gems Construction
Triple Gems Construction မှ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ နေထိုင်ရန်အသင့်အိမ်ခန်းတွေကို အကောင်းဆုံး ငွေပေးချေမှုပုံစံတွေနဲ့ ရောင်းချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Future Dream Construction
Future Dream Construction မှ ပြပွဲအတွင်းလာရောက်ဝယ်ယူသူများကို (၄၀)ရာခိုင်နှုန်း ကနဦးငွေပေးချေပြီး (၂)နှစ်အတိုးမဲ့အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
30% Down Payment Plan ပေးချေပြီး (၄၈) လ အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ရောင်းချပေးသွားမယ့် တိုက်ခန်းတွေကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်က သိန်း (၃၀၀) ကျော်ကနေ စတင်တဲ့ တိုက်ခန်းတွေ ဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ တာမွေမြို့နယ်နဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်က အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းတွေကိုတော့ ပထမဦးဆုံး (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ပေးချေပြီး ကျန်တဲ့ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းကို (၃၆)လ အတိုးမဲ့အရစ်ကျစနစ်နဲ့ရောင်းချသွားမှာပါ။
Copyright © 2018. Shwe Property.com All rights reserved.
T - 1149
N - 776